Afhayeenka howlgalada Al-Shabaab oo sheegay in ay dileen 3sarkaal oo itoobiyaan ah
Baydhabo:-Afhayeenka hawlgalada ee ururka Al-Shabaab Sheekh C/casiis Abu Muscab ayaa maanta sheegay in qaraxii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Bay ay ku dileen 3sarkaal oo ka tirsan ciidanka Itoobiya ee haatan ku sugan Baydhabo.
Sheekh Abu Muscab ayaa sheegay in ay qarxii shalay ay ku dileen sidoo kale askar ka tirsan DFKM mar uu saaka la hadalyey warbaahinta magaalada Muqdisho.
Afhayeenka howlgalada Al-Shabaab ayaa sheegay weerarkii shalay in uu qaaday xubin ka tirsan Ururka Al-Shabaab wuxuuna sheegay in weerarka lala beegsaday ciidamo ka tirsan dalka Itoobiya iyo kuwa DFKM.
Afhayeenka howlgalada Al-Shabaab Sheekh Abu Muscab ayaa waxaa kale oo uu ka warbixiyey dagaalo ay qaadeen Ciidamada Al-Shabaab gaar ahaan gobalka Bay iyo Bakool wuxuuna sheegay in guulo ka gaareen dhamaan dagaaladii ay qaadeen ciidamada Al-Shabaab.
Ciidamada DFKM iyo kuwa Itoobiya ayaa qaraxii shalay ka dib waxay xirxireen dhalinyaro dhowr ah iyaga oo ku xiray Saldhiga magaalada Baydhabo.